खोटाङ सिम्पानीको यस्तो ओढार, जसले आमा छोरालाई क्वाप्पै खायो (भिडियो सहित) - Nepal's Online News
खोटाङ सिम्पानीको यस्तो ओढार, जसले आमा छोरालाई क्वाप्पै खायो (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति : शनिबार, भदौ ३०, २०७५
ताराचन्द्र बस्नेत ।
वल्ल तल्ल लगाएको मकै वाली, दिउँसो भएपछि बाँदरबाट राति भएपछि दुम्सीको मुखबाट जोगाएर खानुपर्ने बाध्यता । त्यहि बाध्यतालाई चिर्न खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका–८ सिम्पानीकी ४५ वर्षीय सरिता तामाङ आफ्ना नावालक छोरा छोरी लिएर दुम्सीलाई धुवाँ लगाउँन गत साउन २६ गते बिहानै डिहीखोलाको ठुलो ओढारमा पुग्छिन् ।
११ वर्षीय छोरा नवल र ८ वर्षीय छोरी पुजनालाई लिएर ओढारमा पुगेकी सरिताको निशाना थियो डिहीखोलाको ओठारमा बस्ने दुम्सीलाई तह लगाउँने र आफ्नो पाक्न लागेको मकै वाली सुरक्षित गर्नै । तर उनको निशाना ठीक बिपरित भईदियो ।
भनाई छ दशा बाजा बजाएर आउँदैन, अनि अर्को पनि भनाई छ, दुम्सीले दुख दिए वरीपरि आगो वाले भाग्छ भन्ने । तर त्यो दिन सरिताको दशा भएको दिन रहेछ । जव सरिताले ओडारको मुखमा आगो वाल्छिन् । त्यो ह्वात्तै ठुलो बलेपछि बाहिर निस्कन सकस बन्नासाथ धुँवामा निसास्सीएर सरिताको ज्यान गएको प्रहरीले अनुमान गर्छ ।
बिहानै घरबाट निस्कीएका उनिहरु दिन बित्न लाग्दासम्म घर नफर्कीएपछि गाँउमा हल्लाखल्ला हुन्छ । उनीहरुको कतै अत्तोपत्तो नभएपछि आफन्त र स्थानीयवासी खोजीकार्यका लागि स्थानीय प्रहरी चौकी सिम्पानी पुग्छन् । त्यसपछी प्रहरी र स्थानीय खोजीको लागि डिहीखोलाको ठूलो ओडारतिर लाग्छन् । ओडार बाहिर मोबाईल,जुत्ता ,चप्पललगायतका सामान भेटिन्छ ।
यत्तिकैमा पुजनाको चिच्याएको आवाज सुनिन्छ । पुजनालाई बोलाउनासाथ उनि आफै बाहिर आउँछिन । र उनि हतास मुद्रामा भन्छिन्,, ममि र दाई भित्र …………. ।
स्थानीय हतार हतार ओडार भीत्र जान्छन् । ओडारभीत्र सरिताको निधन भईसकेको र नवल अर्धचेत अवस्थामा रहेको भेट्छन् ।
स्थानीय रामकुमार पुरीका भन्छ्न, सरिताको शव र नवललाई ओडार बाहिर ल्याएपछि हामी सवै भावविहल भयौ । त्यसपछि सवैलाई खवर ग-यौ र नवललाई उपचारमा लैजानका लागि वातावरण मिलाउँन लाग्यौं ।”
त्यसपछि तत्काल सिम्पानी वडा प्रमुखसहित विभिन्न व्यक्ति तथा निकायको पहलमा २ लाख भन्दा बढी रकममा हेलीकोप्टर चार्टर गरेर उपचारका लागि काठमाण्डौंको शिक्षण अस्पताल लगिन्छ ।
छोरी पुजना समान्य घाईते भएकोले उनलाई घरतर्फ लगिन्छ । उता पैसा कमाउन कतार पुगेका सरिताका जेठा छोरा बिजयलाई यस्तो खबर सुन्दा सपना झैँ लाग्छ । उनी कम्पनीको काम छोडेर नेपाल फर्कन्छन् ।
तर, कान्छा छोरा नवलको एक हप्ताभन्दा बढी समयमा लाखौँ रुपैँया सकिएर आर्थिक संकट खड्किएपछि घर ल्याईन्छ । र अर्धचेतमै नावालक नवलले भदौ २८ गते यो संसारबाट विदा लिन्छन् ।
स्थानीय सुरेश पुरीका अनुसार पुजनाकोे अवस्था भने हाल सामान्य रहेको छ । नावालक छोरा र पत्नि एउटै ओढारले खाएपछि मृतक सरिताका श्रीमान कुशबहादुर तामाङ, विजय र पुजनासंगै सिङ्गो गाउँ यतिवेला शोकमा डुवेको छ ।
सरितका श्रीमान कुशबहादुर स्थानीय प्रजातन्त्र प्रा.वि. डिहिगाँउका प्रध्यानाध्याक हुन् । सिम्पानी मा.वि. सिम्पानीका कक्षा ६ मा अध्ययनरत छात्र नबलको निधनले पूरै विद्यालय शोकमा परेको विद्यालय स्रोत बताउँछ । बाल्यकालमा आमा र दाई गुमाएकी पुजना बाँच्न सफल रहेकोले निकै भाग्यमानी रहेको स्थानीय ८० वर्षीय बृद्धा ईन्द्रकुमारी पुरी बताउँछिन । उनि भन्छिन्, “सोच्दै नसोचेको घटना घट्यो, त्यो अपराधि ओढारले सरिता र नवललाई क्वाप्पै निल्यो ।”
आर्थिक स्तर कमजोर रहेको मृतक सरिताको परिवारलाई कुनै पनि निकायले हालसम्म सहयोगको चेष्टा गरेका छैनन् । नत गाउँपालिका नत वडा कार्यालय कसैले पनि सावन्तना सम्म नदिएको सरिताका श्रीमान कुशबहादुर बताउँछन् ।
भिडियो हेर्नका लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोस :